स्टोक सिटीविरुद्धको खेलमा लिभरपुल विजयी
Published: January 6, 2016 07:47 AM
काठमाडौं, पुस २२ । इंङ्गलिस लिग कप फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत सेमिफाइनल पहिलो लेगको खेलमा लिभरपुल विजयी भएको छ । मंगलबार राति भएको खेलमा लिभरपुलले स्टोक सिटीलाई उसैको मैदानमा १-० ले पराजित गर्‍यो । खेलमा लिभरपुललाई विजयी गराउन जोर्डन आईबले ३७ औं मिनेटमा गरेको गोल निर्णायक बन्यो । लिभरपुल र स्टोक सिटीविचको सेमीफाइनल...
भारतका १५ वर्षीय किशोरको चमत्कार, एकै इनिङमा १ हजार ९ रनको किर्तीमान
Published: January 6, 2016 14:30 PM
काठमाडौं, पुस २२ । भारतको मुम्बईका एक जना १५ वर्षीय क्रिकेट खेलाडीले एकै इनिङमा एक हजार रन बनाउने दुर्लभ किर्तीमान राखेका छन् । मुम्बईको १५ वर्षीय किशोर प्रनभ धन्वाडेले अन्तर विद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिताको क्रममा हिजो अविजित १ हजार ९ रन जोड्दै क्रिकेटमा नयाँ ईतीहास रचेका हुन् । विश्व...
जीवनराम नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीलाई सर्वोच्चले दियो वैधता
Published: January 6, 2016 09:27 AM
काठमाडौं, पुस २१ । जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई सर्वोच्च अदालतले वैधता प्रदान गरेको छ ।तत्कालीन राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्यसचिव युवराज लामाले २०६९ साल असोज २२ गते तत्कालीन अध्यक्ष धु्रवबहादुर प्रधान र महासचिव जीवनराम श्रेष्ठलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्चले नै वैधता दिएको रुक्मशमशेर राणा नेतृत्वको ओलम्पिकलाई दिएको...
सागका लागि तेक्वान्दोका १३ खेलाडी छानिए, को–को परे ?
Published: January 5, 2016 19:18 PM
काठमाडौं, पुस २१ । माघ २३ गतेदेखि भारतमा हुने १२औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)का लागि नेपालबाट तेक्वान्दोतर्फ १३ खेलाडीले सहभागिता जनाउने भएका छन् ।ललितपुरको सातदोबाटोमा सम्पन्न दुईदिने छनोटबाट पाँच महिलासहित १३ खेलाडी छानिएका हुन् । आ–आफ्नो तौल समूहमा पहिलो भएका ८ पुरुष र ५ महिला खेलाडी छनोट भएका हुन् ।महिलातर्फ ६२ केजीमुनि...
यु–१९ विश्वकप क्रिकेटः अष्ट्रेलियाले नखेल्ने, आयरल्यान्डलाई स्थान
Published: January 5, 2016 18:39 PM
काठमाडौं, पुस २१ । बंगलादेशमा माघ १३ गतेदेखि हुँदै गरेको १९ वर्षमुनिको विश्वकप क्रिकेटबाट अष्ट्रेलियाले नाम फिर्ता लिएको छ ।सुरक्षाको कारण देखाउँदै अष्ट्रेलियाले नाम फिर्ता लिनुपरेको अष्ट्रेलिया क्रिकेटका प्रमुख कार्यकारी जेम्स सुदरल्यान्डले जनाएका छन् ।गत अक्टोबरमा अष्ट्रेलियाको सिनियर टिमले सुरक्षाकै कारण नाम फिर्ता लिएसँगै...
बार्सिलोनामाथिको १४ महिने प्रतिबन्ध टुंगियो, नयाँ खेलाडीको दर्ता सुरु
Published: January 5, 2016 08:54 AM
काठमाडौं, पुस २१ । स्पेनिस फुटबल क्लब बार्सिलोनालाई नयाँ खेलाडी दर्ता गर्न लगाइएको १४ महिने प्रतिबन्ध टुंगिएको छ । बार्सिलोनाले युवा खेलाडी क्लबमा भित्र्याउँदा अन्तर्राष्ट्रिय नियम मिचेको कसुरमा विश्व फुटबल महासंघ फिफाले उसलाई १४ महिने प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यही प्रतिबन्धको समय...
१२ औं सागका लागि तेक्वान्दोबाट तीन महिला खेलाडी छानिए
Published: January 5, 2016 08:16 AM
काठमाडौं, पुस २१ । भारतमा यही माघ २३ गतेदेखि हुने १२ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)का लागि तेक्वान्दो खेलाडीहरु छनोट हुने क्रम जारी छ ।यसैक्रममा तीन महिला खेलाडी आयशा शाक्य, यानकुमारी चौलागाईँ र रेजिना कार्की छनोट भएका छन् । आ–आफ्नो तौलसमूहमा पहिलो भएका खेलाडी सागका लागि सोमबार छनोट भएका हुन् । ललितपुरको...
रियल मड्रिडका प्रशिक्षक राफा बेनिटेज बर्खास्त, जिदानले पाए जिम्मेवारी
Published: January 5, 2016 07:07 AM
काठमाडौं, पुस २१ । स्पेनिस फुटबल क्लव रियल मड्रिडले प्रशिक्षक राफा बेनिटेजलाई बर्खास्त गरेको छ । उनको ठाँउमा फ्रेन्च फुटबल हस्ती जिनेदिन जिदानलाई प्रशिक्षकको जिम्मेवारी दिइएको छ । रियल मड्रिडले बेनिटेजलाई प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको सात महिनाको छोटो अवधिमै बर्खास्त गरेको हो । क्लब...
बंगबन्धु फुटबलका लागि नेपाली टिमको घोषणा, को–को परे ?
Published: January 4, 2016 18:53 PM
अपडेटःकाठमाडौं, पुस २० । बंगलादेशमा शुक्रबारदेखि सुुरु हुँदै गरेको बंगबन्धु गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताका लागि अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले सोमबार नेपाली टिमको घोषणा गरेको छ ।बंगलादेश जाने टिममा गोलकिपरमा एलन न्यौपाने, अमृत चौधरी र बिकेश कुथु तथा डिफेन्डरमा आदित्य चौधरी, अनन्त तामाङ, विराज महर्जन, देवेन्द्र तामाङ,...
उपाधी दाबेदार रियल मड्रिड भ्यालेन्सियासँग बराबरीमै रोकियो
Published: January 4, 2016 12:08 PM
काठमाडौं, पुस २० । स्पेनिस लिग ला लिगा फुटबलमा उपाधी दाबेदार रियल मड्रिड भ्यालेन्सियासँग बराबरीमै रोकिएको छ । आइतबार राति भएको खेलमा रियल मड्रिड भ्यालेन्सियासँग २–२ गोलको बराबरीमा रोकिएको हो । भ्यालेन्सियाको मैदानमा भएको खेलमा रियलका लागि गेराथ बेल र करिम बेन्जेमाले १–१ गोल गरे । ...
चेल्सीले क्रिष्टल प्यालेसलाई ३-० ले हरायो
Published: January 4, 2016 07:40 AM
काठमाडौं, पुस २० । इङ्गलिस प्रिमियर लिग फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत आइतबार राती भएको खेलमा चेल्सीले क्रिष्टल प्यालेसलाई ३-० ले हराएको छ । क्रिष्टल प्यालेसको मैदानमा भएको खेलमा चेल्सीलाई विजयी गराउन ओस्कार, विलियन र डिएगो कोष्टाले एक एक गोल गरे । जितपछि चेल्सी इङ्गलिस प्रिमियर लिग...
सुनिल क्षेत्रीको निर्णायक गोलले भारतलाई साफ च्याम्पियनसिपको उपाधि
Published: January 4, 2016 11:21 AM
काठमाडौं, पुस २० । एघारौं साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको उपाधि आयोजक भारतले जितेको छ । केरलामा आइतबार राति भएको फाइनल खेलमा साविक विजेता अफगानिस्तानलाई २–१ गोल अन्तरले पराजित गर्दै भारतले सातौं पटक उपाधि जितेको हो । यो जितसँगै भारतले अघिल्लो संस्करणको फाईनलमा अफ्गानिस्तनसँग भोगेको हारको बदला समेत लिएको छ । निर्धारित...
आहा रारा कप गोल्डकप फुटबल माघमा, एकजना दर्शकलाई सुनको सिक्का दिइने
Published: January 3, 2016 18:57 PM
काठमाडौं, पुस १९ । सहारा क्लब पोखराको आयोजनामा आगामी माघ ५ देखि १६ गतेसम्म १४ औं आहा रारा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिता हुने भएको छ । प्रतियोगितामा ३ विदेशी सहित १२ टिम सहभागी हुने आयोजक सहारा क्लवले जनाएको छ । सहारा क्लबका अध्यक्ष बीरभद्र आचार्यका अनुसार प्रतियोगितामा आयोजक सहारा...
शिर्ष क्लवहरु आर्सनल, म्यान्चेस्टर सिटी र युनाईटेड विजयी
Published: January 3, 2016 08:18 AM
काठमाडौं, पुस १९ । इंङ्गलिस प्रिमियर लिग फुटबल अन्तर्गत शनिबार राति सम्पन्न खेलहरुमा शिर्ष क्लवहरु, आर्सनल, म्यान्चेस्टर सिटी र म्यान्चेस्टर युनाईटेड विजयी भएका छन् । अंक तालिकाको शिर्ष स्थानमा रहेको आर्सनलले न्युकासल युनाईटेडलाई १-० ले हरायो । आर्सनलका लागि लरेन कोसेल्नीले निर्णायक गोल गरे । यसैगरी तालिकाको तेस्रो...
आज साफ च्याम्पियनसिपको फाईनल, भारत र अफ्गानिस्तान भिड्दै
Published: January 3, 2016 13:41 PM
काठमाडौं, पुस १९ । भारतमा जारी एघारौं साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको फाईनल खेल आज(आइतबार)हुँदैछ । केरलामा जारी प्रतियोगिताको उपाधि भिडन्तमा आयोजक भारत र साविक विजेता अफ्गानिस्तान भिड्नेछन् । दुई वर्ष अगाडि काठमाडौंमा भएको साफ च्याम्पियनसिपमा पहिलो पटक सहभागिता जनाएको अफ्गानिस्तानले त्यतिबेला फाईनलमा भारतलाई हराएर उपाधि...